Maitiro ekutarisa iyo dB nhanho mune iOS 14 munguva chaiyo IPhone nhau
Maitiro ekutarisa dB level mune iOS 14 munguva chaiyo
Ignacio Sala | | iOS 14, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Apple inogona kushoropodzwa nekuda kwezvinhu zvakawanda, kunyanya kuzvidzora kuhurumende yeChinese. Nekudaro, isu zvakare tinofanirwa kuziva kuti inoratidza kutarisisa kwakanyanya kuitira kuti vashandisi vayo vagone, panguva dzese, kuve neruzivo, uye nepazvinogona napo kuziva ruoko rwekutanga. ruzivo nezve hutano hwako.
Asi pamusoro pezvo, inoisawo maturusi edu maturusi akasiyana ku kudzivirira zvinhu zvekunze kubva mukukanganisa hutano hweduPamusoro pekupa huwandu hukuru hweanogona kuita sarudzo kuitira kuti matambudziko ekufamba, kuona kana matambudziko ekunzwa anogona kushandisa zvigadzirwa zvavo pasina matambudziko.
Mupfungwa iyi, neIOS 13, Apple yakaunza basa muHutano application iro rinozivisa vashandisi vanogara vachishandisa mahedhifoni kana vari kufumurwa kwenguva yakareba yenguva padanho repamusoro reruzha.
Na iOS 14, Apple inowedzera basa nyowani, basa rinotibvumidza kuwedzera a mwero wedecibel iyo inoyera nguva dzese ruzha urwo mahedhifoni edu ari kuburitsa, angave mimhanzi, mavhidhiyo kana chero zvimwe zvemultimedia zvinosanganisira mitambo.
1 Dzivisa matambudziko ekunzwa
2 watchOS 6 inosanganisa mita yeDB
3 Maitiro ekuwedzera iyo dB mita kune iyo Inodzora Center
4 Mashandiro anoita iOS 14 dB mita
5 Basa rinoenderana nechero mahedhifoni uye masipika
Dzivisa matambudziko ekunzwa
Nechiitiko ichi chitsva, Apple iri kunyatsoteerera njodzi dzehutano dzekufumurwa kune yakakwira vhoriyamu odhiyo. Kuteerera pa80 dB kwemaawa anopfuura makumi mana mukati mevhiki kunowedzera njodzi yekurasikirwa kwekunzwa. Kana iwe ukachinjisa kusvika ku40 dB, kukuvara kwehutano kunogona kuoneka mushure memaawa mana ekutamba pasvondo. Kana tikakwidziridza ku90 dB, zviratidzo zvekutanga zvinogona kuoneka nemaminetsi mashoma pasvondo.
Nekuda kweiri basa nyowani, tinogona kutarisa nguva dzese, kana huwandu hwehuwandu hwezviri kutambiswa chero nguva iri yakakodzera hutano hwedu. Apple yakaunza iri basa zvakananga muDirect Center, saka kubva kune chero application tinogona kukurumidza kuwana iri basa rinowanikwa muIOS 14.
watchOS 6 inosanganisa mita yeDB
Iyo Apple Watch Series 5 chave chiri chinhu chakagashira shoma nhau kana ichienzaniswa nezvizvarwa zvakapfuura nekushanda kweye-in-screen nguva dzose sekukwezva kukuru. Iine watchOS 6, Apple yakaunza, mu Series 4 uye Series 5, iko Noise application, iko kushanda kunotarisira tizivise kana isu takatarisana nenzvimbo dzakakwirira dzeruzha kwenguva refu yenguva kuburikidza nekamwe kadengenyeka (sezvo zviri pachena kuti hatizonzwa chiziviso).
Maitiro ekuwedzera iyo dB mita kune iyo Inodzora Center
Isu tinoenda kuZvirongwa zvechigadzirwa chedu uye kuwana Kudzora nzvimbo (iri pazasi peiyo General sarudzo).
Mukati meContent Center menyu, tinotsvaga sarudzo Kunzwa uye tinya pane green + chikwangwani chiri pamberi pezita chete.
Mashandiro anoita iOS 14 dB mita
Kana tangowedzera iyo dB mita kune iyo Kudzora Center, ngatione kuti zvinoshanda sei. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kutamba rwiyo, kuvhura, kumhanya mutambo (usingamire patinovhura iyo Control Center) kana kuvhura vhidhiyo (semuenzaniso kubva kuYouTube).
Tevere, tinosvika kuControl Center uye tinya pane Inzwa icon, inomiririrwa nenzeve. Patinoivhura, tinogona kuona iyo decibel mita inoshuma iyo yazvino dB nhanho (yakakosha iyo redundancy) maererano nevhoriyamu yatakasimbisa panguva iyoyo.
Kana isu tikakwidza vhoriyamu, tinoona kuti iyo dB nhanho inowedzera sei. Kana ikapfuura 80 dB, iyo mita yemuvara inozoita yero. Chete kana ikasvika 110 dB, iyo mita yemuvara inoshanduka kuita tsvuku. Inokurudzirwa kuti iyo nhanho haizombopfuure makumi masere neshanu.
Kuva basa rinoyera iyo dB level iyo inogona kukanganisa kwedu kunzwa kuita, iri basa inowanikwa kana takambobatanidza mahedhifoni, ivo havafanirwe kunge vasina waya, sezvo ichiyerawo ruzha rwekunze kuburikidza nekubatanidza kwehedifoni pane zvishandiso zvekare izvo zvichiri kunakidzwa nazvo.
Basa rinoenderana nechero mahedhifoni uye masipika
Nekudaro, sekureva kwaApple, kuyerwa kwakanyanya kweiyo dB nhanho yeaudio iri kuburitswa pachigadzirwa chedu kunogara kuri kwakarurama. nemahedhifoni anoita kuti Apple iwanikwe kwatiri.
Ndanga ndichida tarisa kana kurudziro iyi ichokwadi neBeats Solo3 Wireless yandinayo uye ini ndinofanira kutaura kuti iyo dB nhanho yandakawana yakafanana, haina kusiyana 1 kana 2 dB pakati peSolo3 Betas neiyo Sony wired mahedhifoni andakaedza chinyorwa ichi.
Asi basa iri, haingoshanda chete nemahedhifoni, asi pamusoro pezvo, inozviitawo nematauri akabatana kuburikidza netambo (chishandiso hachigone kuziva kana ari mahedhifoni kana masipika) kana kuburikidza neBluetooth. Nekudaro, kuyerwa kwainotipa kunoratidza iyo dB nhanho yatinayo kana takanamatira kumukurukuri, saka haimiriri mumamiriro mazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Maitiro ekutarisa dB level mune iOS 14 munguva chaiyo
Mazuva ese - Kupotsa Apple's AirPorts
Apple inopomerwa mhosva yekudzivirira muHong Kong: nhoroondo inozvidzokorora